Bogga Akhriska ee La Cusboonaysiiyay | Martech Zone
Axad, Sebtembar 24, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan ku rartay Amazon WordPress Plugin maanta - way qabataa shaqada! Dib ayaan u sameeyay reading bogga, laakiin waxaad u maleyneysay inaad jeclaan lahayd inaad aragto waxa aan ku sameeyo dhammaan waqtigayga firaaqada :).
Majaladaha Aan Ugu Jeclahay
Buugga qorista ee aan ugu jeclahay
Buugaagta Nalalka aan ugu jeclahay
Waraaqaha Style Cascading Style (CSS) ee aan ugu jeclahay
Buuggayga Aan Ugu Jeclaa Ajax
Buuggayaashayda aan ugu jeclahay & Buugaagta Photoshop
Buugaagta Hoggaanka ee aan ugu jeclahay
Buugaagta Aan Ugu Jeclahay Ganacsiga Iyo Suuqgeynta
Buugaagta aan ugu jeclahay Tiknoolajiyadda, Horumarinta iyo Maareynta Wax soo saarka
Sep 25, 2006 at 9: 49 AM
Taasi waa buugaag badan! Waa inaan qiraa, goor dambe ayaan hadda gabi ahaanba joojiyay akhriska. Inta badan waxaan aqriyaa buugaagta siyaasada ladagaalanka lacagta la dhaqay, maaliyadaha maaliyadeed, iyo waxyaabahaas sort
Sep 25, 2006 at 3: 14 PM
Waad ku mahadsantahay liiskaas, waxaa jira qaar aan si qeexan u eegi doono.
(Talooyin ahaan, waxaan ku qoslay markii amazon ay soo jeediyeen in kuwa xiiseynaya buugga suuqgeynta "lo'da guduudka ah), ay sidoo kale xiiseyn karaan" Beeraha Caanaha iyo Daryeelka Lo'da Maanta - ?? Baro sida beeraleyda caanaha casriga ahi u daryeelaan lo'dooda iyo deegaanka. ”
Waxaan ahay shaki in that